Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! पहिरोपीडितलाई भेट्न संघीय सांसद, प्रदेश उपसभामुख र मन्त्री शिखरबेंसीमा
पहिरोपीडितलाई भेट्न संघीय सांसद, प्रदेश उपसभामुख र मन्त्री शिखरबेंसीमा जस्तापाता सहयोग उपलब्ध
नुवाकोट । जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले दुप्चेश्वर गाउँपालिका ७, शिखरबेंसीका पहिरोस्थलको अवलोकन र प्रभावित स्थानीयलाई भेट्नुभएको छ । संघीय सांसद हितबहादुर तामाङ, वाग्मती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङले आइतबार शिखरबेंसी पुगेर स्थलगत अवलोकन र पहिरो पीडितलाई भेट्नु भएको हो । त्यसक्रममा सांसद र उपसभामुख तामाङले नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुप्चेश्वर गाउँपालिका संगठन समितिको समन्वयमा उपलब्ध जस्तापाता प्रभावितलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा छोटो मन्तव्य राख्दै सांसद हितबहादुर तामाङले पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थायी बसोबासका लागि सरकारसँग पहल गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै उपसभामुख राधिका तामाङले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारबाट २५ हजार दिने व्यवस्था भएको जनाउँदै त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिने बताउनुभयो । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि थप सहयोगका लागि पहल गर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।
यसैबीच संघीय सांसद र उपसभामुखको कार्यक्रम चलेकै बखत वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशव पाण्डे पनि आइतबार सोही क्षेत्र पुग्नु भएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य बद्री मैनालीसँगै पुग्नुभएका मन्त्री पाण्डेले पनि नेकपा (एमाले) नुवाकोटले उपलब्ध गराएको जस्तापाता पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
साविकको नेकपाका नेताहरु जम्काभेट भएपछि केहीबेर घोचपेज चलेको थियो । सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित उपसभामुख तामाङले 'सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले कुनै समन्वय र जानकारीबिना रित्तो हात' आएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । उहाँले मन्त्री पाण्डेलाई इंगित गरी भन्नु भएको थियो, 'यहाँ आएर पीडितलाई यसो गरौंला भनेर आश्वासन दिनुभन्दा हामीले यो गर्‍यौं भनेर दिन गएको भए राम्रो हुने' थियो नि ! मन्त्री पाण्डे भने चुपचापझैं देखिनुभयो ।
बुधबार बिहान पहिरोसँगै खसेको ढुंगाले स्थानीय रामचन्द्र नेपाली, विष्णु नेपाली र शान्ता दमाईंको घरमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको थियो । यस क्रममा विष्णु नेपालीको १६ वर्षीय छोरी अस्मिता गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो । उनको काठामाडौंमा उपचार भइरहेको छ । पीडित परिवारलाई यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिपरिवार २० हजार उपलब्ध गराइसकेको छ भने माओवादी केन्द्र दुप्चेश्वरले २५ हजार नगद सहयोग गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १०, २०७८, १९:२९:००